जिल्ला स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि हेलम्बुलाई – नयाँ अभियान
in खेलकुद, सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु गाँउपालिका
नयाँ अभियान सम्वाददाता,मेलम्ची, बैशाख ८ ।
जिल्ला स्तरीय महिला भलिबलको उपाधि हेलम्बु गाउँपालिकाले जितेको छ ।
बुधबार मेलम्चीमा भएको खेलमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई ३–१ ले हराउँदै हेलम्बु गाउँपालिकाले नगद रु. १ लाखसहित कप र मेडल प्राप्त गरेको हो । दोस्रो हुने टिमले रु. ५० हजारसहित कप र मेडल प्राप्त गर्यो ।
तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाले रु. २५÷२५ हजारका साथमा कप र मेडल प्राप्त गरेका छन् ।
सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्ने पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले रु. १० हजार र कप पाएको खेल संयोजक राजनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
हाम्रो टिम मेलम्चीको आयोजना र रेडियो मेलम्चीको सह–आयोजनामा भएको सो प्रतियोगिता सोमबार मेलम्ची बजारमा सुरु भएको थियो ।
मेलम्ची नगरपालिकाकाले आर्थिक सहयोगमा सो खेल भएको हो । खेलमा विभिन्न विधाका उत्कृष्ट ६ खेलाडीले तीन हजार नगद पुरस्कारका साथमा ट्रफी प्राप्त गरेका छन् । चार विधामा हेलम्बु गाउँपालिकाले पुरस्कार जितेको छ ।
यसमा उत्कृष्ट खेलाडी फुरल्हामु पाख्रिन, उत्कृष्ट स्पाइकर चाहना तामाङ, उत्कृष्ट डिफेन्डर रीमा भुजेल र उत्कृष्ट लिफ्टर अमिना तामाङ घोषित भए ।
त्यस्तै चौतारा साँगाचोकगढीकी सुस्मिता श्रेष्ठले उत्कृष्ट सर्भर र मेलम्ची नगरपालिकाकी रमिला तामाङले नव प्रतिभा खेलाडीको उपाधि पाउनुभएको मुख्य रेफ्री श्रीराम बोगटीले जानकारी दिए ।
समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्याल र उपप्रमुख भगवती नेपालले खेलाडीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेे थिए ।
Tags: जिल्ला स्तरीय महिला भलिबलहेलम्बु
भोटेकोशीमा अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता: न्यु डाइमनको बिजयी सुरुवात